Xiaomi Mi MIX 4: ဒါဟာသူ့ရဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်လိမ့်မယ် Androidsis
Xiaomi Mi MIX4ပေါက်ကြားမှု။ သင်က၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ hallucinate သွားကြသည်!
Xiaomi ကငါတို့နဲ့အတူကြောင်၊ မောက်စ်ကစားနေပုံရတယ်။ ပြီးတော့အောက်တိုဘာအစမှာသူကငါတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ် Mi MIX3ကိုဆက်ခံသူ စျေးကွက်ကိုမထိတော့ပါ တောင်မှ သူတို့ Mi MIX Alpha ကိုတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်ကဏ္ sector ၏ထိပ်ဆုံးတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောမော်ဒယ်လ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ပုံရသည် Xiaomi က Mi MIX4။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့အင်တာနက်ပေါ်မှပေါက်ကြားခဲ့သောဖုန်း၏ပုံရိပ်ကြောင့်ဒီထူးခြားထင်ရှားသော Xiaomi Mi MIX4၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်လှသည်။ အဲဒါအတုလား? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖန်သားပြင်ကသင့်ကိုပါးစပ်နဲ့ဖွင့်ထားလိမ့်မယ်။
ဤသည် Xiaomi Mi MIX4၏မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကင်မရာဘယ်မှာလဲ။
ဤလိုင်းများကို ဦး တည်နေသောပုံတွင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအတုမဟုတ်ကြောင်းမှတ်ယူထားသည့်အတိုင်း Xiaomi သည် Mi MIX4အသစ်နှင့်အတူအရည်အသွေးသစ်ကိုရယူခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ terminal တွင်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ထောင့်ဖြတ်ရှိသည်။ ဒီအမျိုးအစားထဲမှာပုံမှန်အတိုင်း။ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အံ့အားသင့်စရာကတော့ဓာတ်ပုံကဏ္surpriseမှာပါ။
အတိအကျ Xiaomi Mi MIX4၏ရှေ့ကင်မရာသည်ဘယ်မှာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ၄ င်းသည် panel ၏အောက်၌ပုန်းနေပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံသော All-screen effect ကိုရရှိသည်။ ထို့အပြင်ဖုန်းတွင် frame အနည်းဆုံးရှိသည်ကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင် screen ၏မျက်နှာပြင်သည်မှန်သော bombshell ဖြစ်နိုင်သည့်ဖုန်း၏ရှေ့မျက်နှာစာ၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။
ဤဖုန်းတွင်မည်သည့်အချက်အလက်မျှမရှိသော်လည်း၊ အကောင်းဆုံးသောအချက်မှာအကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံး Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာ၊ 8 GB RAM၊ 256 GB သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုနှင့်အထွေထွေ၊ မည်သည့်ဂိမ်းသို့မဟုတ် app ကိုရွှေ့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သတိပြုပါ။ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရက်ချိန်းယူရမည်။ မမ Xiaomi MI ရောနှော 4?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi Mi MIX4ပေါက်ကြားမှု။ သင်က၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ hallucinate သွားကြသည်!
လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိများက၎င်းသည်အတုဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ရုပ်ပုံမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ပုံအယ်ဒီတာနှင့်ပြုပြင်ထားသောနဂါးငွေ့တန်းမှတ်စု ၁၀ တွင်ဖြစ်သည်။
ပိုကီမွန်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဝင်ငွေ ၃ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်
Motorola RAZR အသစ်၏တရားဝင်ပုံရိပ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိသွားမည့်ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သည်